Dzidza Mitauro muna 2021 - UniProyecta
KuUniProyecta isu tinotenda kuti imwe yedzakanakisa nzira dzekusimudzira nekutsvaga tsika ndeyedzimwe mitauro. Neichi chikonzero, muchikamu chino iwe unowana ma guides ekudzidza mitauro mikuru yenyika: Chirungu, ChiFrench ... uye nezvimwe zvakawanda!
Kudzidza mavara muChirungu kunogona kuve nyore kana kuoma, zvichienderana nekugona kudzidza kweumwe neumwe. Panyaya yevana, mutauro uyu uri nyore ku...
Chirungu ndeimwe yemitauro inonyanya kutaurwa munyika. Mataurirwo acho haasi nyore sezvatinoda, asi unogona kutanga nemisoro yakapfava, senge manhamba, ...
Kana iwe uchida mazwi erudo, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuve nechokwadi chekuti akanyorwa nemazvo, nekuti nekuda kwezvikonzero zvekusaziva uye kuda kukwezva kutarisa ...
Kana iwe uchida kudzidza mutauro wepasi rose zviri nyore uye nekukurumidza, nzira yakanaka ndeyekuzviita kuburikidza nekudyidzana, mavhidhiyo uye kunyange kudzidzira nziyo dzinosanganisira mwedzi wega wega ...
Paunenge uchitaura mutauro mutsva wakadai seChirungu, zvakakosha kuti udzidze prepositions muChirungu, sezvo ivo vachakubvumidza iwe kuita mabasa akakosha. Mutauro unoshamisa uyu...
Papeji rino tichadzidzisa nzira dzakasiyana dzekuti ukwanise kudzidza Chirungu zviri nyore uye zviri nyore, ndosaka nhasi tichaona manhamba muChirungu: kubva pa1 ...
Mutauro wechipiri unonyanya kutaurwa muEurope iGerman. Saka kana ukaronga kushanyira nyika ino, chingave chinhu chakanaka kuti uzvizive nemutauro wechiGerman. Tanga ne…
Mutauro wechiArabic wakanyorwa seimwe yemitauro yakaoma kwazvo kudzidza, zvisinei, kunzwisisa nhamba kuri nyore. Arabic ndiwo mutauro wepamutemo uye wepamutemo...